Alexandra Daddario – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Lost Girls and Love Hotels (2020) Unicode ဒီကားက မငျးသမီး Alexandra Daddario ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ. ဇာတျလမျးလေးကတော့ အမရေိကနျကနေ ဂပြနျလကွေောငျးလိုငျးအတှကျ English စာလာသငျပေးတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျ ဂပြနျမှာအထီးကနျြဆနျစှာဖွတျသနျးရငျး ဂပြနျက တကျတူးအပွညျ့ထိုးထားတဲ့ ယာကူဇာတဈယောကျနဲ့ ခဈြကွိုကျမိတဲ့ အကွောငျးကို ပုံဖျောထားတာဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအမြိုးအစားကတော့ ဒရမျမာဆနျပါတယျ။ ဇာတျအိမျကလဲ အခဈြအကွောငျးကို အဓိကရိုကျကူးထားတာဖွဈသလို ဂပြနျရိုးရာ ဂပြနျယာကူဇာတဈယောကျနဲ့ အမရေိကနျအမြိုးသမီးတို့ ရှဆေ့ကျဖို့ဖွဈနိုငျမဖွဈနိုငျကို ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပါအုံး ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Van ဖွဈပါတယျ Zawgyi ဒီကားက မင်းသမီး Alexandra Daddario ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အမေရိကန်ကနေ ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းအတွက် English စာလာသင်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဂျပန်မှာအထီးကျန်ဆန်စွာဖြတ်သန်းရင်း ဂျပန်က တက်တူးအပြည့်ထိုးထားတဲ့ ယာကူဇာတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်မိတဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားကတော့ ဒရမ်မာဆန်ပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကလဲ အချစ်အကြောင်းကို အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်သလို ဂျပန်ရိုးရာ ဂျပန်ယာကူဇာတစ်ယောက်နဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီးတို့ ရှေ့ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါအုံး ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ...
IMDB: 4.4/10 292 votes
Baywatch (2017) Baywatch (2017) သည် IMDb 5.5/10 Google users 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Seth Gordon ရိုက်ကူးထား၍ Michael Berk, Douglas Schwartz တို့ကဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားက သရုပ်ဆောင် Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Comedy, Crime ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…အသက်ကယ်ဆယ်ရေးသမား မစ် ဘူချန်နန်ဟာ အဖွဲ့ဝင်အသစ်နဲ့အတူ ပင်လယ်အော်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင် ဟာသတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ... Credit Review
San Andreas (2015) ပရိတ်သတ်တွေအတွက် The Rock မင်းသားကြီးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating 6.2 ရရှိထားပြီး ကြည့်ရှုဖို့လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။အဖြစ်အပျက်က ဒီဇာတ်ကားမှာ The Rock လို့လူသိများတဲ့မင်းသားကြီးဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်ကြီးကြားက အသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်မဲ့ ရဟတ်ယာဉ်ပိုင်းလော့ တစ်ယောက်ပါ။ ငလျင်ဒဏ်မှာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့သမီးကို သူနဲ့ Ex-wife ဖြစ်လုဆဲဆဲ ဇနီးနဲ့အတူ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စွန့်စားခန်းတွေဖွင့်ပြီး သွားရောက်ကယ်ဆယ်ကြမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားကြီးရဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အပြင် ကြည့်ဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံး လို့ ပြောလို့ရတဲ့ CGI effect တွေကြောင့် ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မင်းသမီးနှစ်လက်လုံးကလဲ ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိနေတဲ့အတွက် ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ့် ကားသစ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review
IMDB: 6.1/10 192,644 votes
Percy Jackson: Sea of Monsters (2013) ခေတ်သစ်ကာလ ဂရိနတ်ဘုရားတွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ သူတို့အတွက် သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့ စခန်းတစ်ခုမှာ စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာကို လာတဲ့လမ်းမှာ ရှေးဟောင်း သတ္တ၀ါကြီးတွေက ဖြတ်သမျှ လူတွေကို လိုက်လံသတ်ဖြတ် စားသောက်ကြပါတယ်။ Annabeth ၊ Luke ၊ Grover နဲ့ Thalia တို့ဟာ စခန်းကိုအလာ လမ်းမှာ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် Thalia က အသက်နဲ့ရင်းပြီး ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Thalia သေဆုံးသွားတာကို သိရှိသွားတဲ့ နတ်ဘုရင်ကြီး Zeus ဟာ Thalia ကို အသက်ဆက်ရှင်နိုင်အောင် ထင်းရှူးပင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထင်းရှူးပင် Thalia ဟာ စခန်းကို ရန်သူတွေ မ၀င်ရောက်နိုင်အောင် အကာအကွယ် တံတိုင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ရေနတ်ဘုရားရဲ့သား Percy ဟာ လျှပ်စီးလက်နက်သူခိုးကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီးနောက်ပိုင်း စခန်းမှာ တခြားနတ်ဘုရားတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ ...